tsipika fanenitra avo roa heny haingam-pandeha super vera vita T latabatra famindrana T
Ity tsipika famokarana ity dia misy latabatra fandrefesana habe iray manan-tsaina, edger roa ary latabatra famindrana L-Shape iray. Ny seranana dia azo ampiasaina amin'ny fampifandraisana ny latabatra fandrefesana amin'ny rafitra ERP sy ny rafitra fitiliana hanamorana ny filan'ny famokarana mandeha ho azy. Ny latabatra fandrefesana fitaratra dia ampiasaina hamindrana sy hametrahana ny fitaratra hararaotina, hanaovana fandrefesana marina ny halavany, ny sakany ary ny hatevin'ny vera, ary ampitao amin'ny data grinder roa hafa sy ireo fitaovana fanodinana hafa ny angona ho an'ny fanodinana vera fanampiny.
roa edger fisaka edgers feno mandeha ho azy
Ity edger avo roa heny ity dia afaka manosika / manosotra vera fisaka roa amin'ny fotoana iray. Ity milina ity dia mandray ny fifehezana PLC sy ny interface interface.
Ny fizarana fitotoana finday dia mihetsika manaraka ny torolàlana mitondra kambana baolina kambana. Ny fandefasana dia ampiharina amin'ny alàlan'ny volo baolina kambana misy kambana, izay tarihan'ny motera miaraka amina fiatoana.
Ny fiakarana / fianjeran'ny rafitra fanaraha-maso ambony sy ny motor arris ambony dia entin'ny motera. Azo apetraka ho azy arakaraka ny fampidirana hatevin'ny vera isan-karazany.
Masinina 9 maotera kely beveling PLC fanaraha-maso ZX261D 361D 371D
Ity milina ity dia natao hanamboarana bevel amin'ny vera kely sy amin'ny vera lehibe. Ny làlan'ny mpampita aoriana dia azo afindra miakatra sy midina arakaraka ny haben'ny fitaratra. Ho an'ny haben'ny vera kely, ny làlan'ny mpampita aoriana dia azo afindra miakatra. Ho an'ny haben'ny vera lehibe, ny làlan'ny mpampita aoriana dia azo afindra mankany ambany, mandray ny fifehezana PLC sy ny interface interface. Ny efijery dia afaka mampiseho ny hatevin'ny fitaratra, ny zoro, ny sakany ary ny haavon'ny lalana miverina.
Conveyors dia mampiasa rafi-pandefasana rojo lehibe, pads fitaratra fitaratra dia manana endrika ho an'ny fitaratra kely, azo ovaina izy io rehefa avy reraka. Nifindra tamim-pilaminana ity fitaratra fiantohana ity. Ny fiasa miasa dia avo.
Beveler fitaratra manual 11 moto miaraka amin'ny fandidiana mora haingana
Ity milina ity dia natao hamokarana sisin'ny volo, miaraka amina fikosoham-baravarankely. Ny mpampita dia mampiasa rafitra rojo matevina fohy. Ny kodiarana fitotoana dia entin'ny motera ABB avo lenta. Ny hafainganam-pandeha dia azo ovaina amin'ny regulator tsy misy dingana. Ny lalamby anoloana dia entin'ny motera hanamboarana ny hatevin'ny fitaratra isan-karazany. Ny hatevin'ny fitaratra sy ny hafainganam-pandeha dia aseho amin'ny famakiana nomerika. Ity milina ity dia asongadin'ny fahombiazana avo lenta sy ny marina, ny kalitao azo antoka, ny fandidiana mora ary ny akanjo ambany.
Motera 6 boribory faribolana OG milina fitaratra malaza indrindra
Ny masinina dia afaka mamokatra boribory boribory, sisin'ny OG, ary ny sisin'ny profil amin'ny vera fisaka. Ny mpampita eo anoloana dia azo afindra mifanindran-dàlana mba hifanaraka amin'ny hatevin'ny fitaratra samy hafa. Ireo kodiarana roa manelika dia afaka manala arris of vera, izay mampihena ny asan'ny kodiarana peripheral aoriana, manalava ny fotoana iainan'ny kodiarana peripheral ary mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny asa.
milina fandavahana automatique mandeha ho azy miaraka amin'ny rafitra PLC sy Servo
Ity milina fandavahana vera ity dia azo ampifandraisina amin'ny masinina fanodin-droa mba hanaovana tsipika mandeha ho azy. Afaka miasa tsy miankina ihany koa izy io.
Masinina fandavahana vera ZX100 misy laser
Ity milina ity dia mandray teknolojia mpampita fampitaovana fotoana sy solika buff. Ny fametrahana ny lavaka fandavahana dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny fomba mekanika na laser. Pneumatika clamper fihazonana fitaratra amin'ny tsindry azo ovaina. Ny milina dia manana satan'ny asa roa: manual & automatique. Amin'ny maody amin'ny tanana, mandeha iray monja ny masinina. Amin'ny maody mandeha ho azy, miasa tsy tapaka ny masinina. Ny milina dia asongadin'ny fahombiazany miasa be, ny fahasimban'ny vera ambany ary ny fandidiana azy mora.